Precision Roller Chain - onye nrụpụta ike nke Singapore pte ltd
Kwadobe & ogbe
Nkwonkwo Universalwa nile
Ihe olu akwa
Brek na ipigide
Onye na-egbochi iyi ya
Nkenke ala Chain
Ijikọ njikọ weebụsaịtị - Pịa Fit (BS / DIN / ANSI)
Njikọ weebụsaịtị na -ejikọkarị ọnụ maka usoro ANSI nke nwere ike ịwepụ, na -ejikwa ụdọ agbagoro ebe a na -ezute oke ọsọ ma ọ bụ nsogbu siri ike. Enyere ntụtụ abụọ na -ejikọ ọnụ na -abata na efere elu, efere ọzọ dị na mpụga ugbu a bụ egwuregwu pịa na mkpọ ahụ wee nwee nchekwa site na ntụtụ gbawara agbawa mgbe mgbakọ gachara. Pịa njikọ njikọta egwuregwu ka enwere ike iji ugbu a; a ga -enwerịrị njikọ azụ ọhụrụ mgbe niile iji gbanwee hyperlinks ndị etisasịworo.
Backlinks na -agba agba
Ewezuga ụdọ ndị pụrụ iche ebe njikọ njikọ weebụsaịtị ahụ bụ atụmatụ dị mkpa na njiri mara ụdị, a na -etinye njikọ azụ azụ gbabara naanị ebe ogologo ogologo agbụ ga -abụ ọtụ. Omume a abụghị ihe agbamume; draịva niile kwesịrị, ebe ọ bụla enwere ike, hazie ya na nhazigharị zuru oke iji hụ na ejiri ọnụọgụ pọdkastị n'oge yinye. Ya adịla mgbe ị ga -eji njikọ azụ azụ mebiri emebi na -arụ ọrụ, dị oke egwu ma ọ bụ nnukwu ọsọ na -anya.
Njikọ ejikọtara ọnụ - Slip Fit (BS/DIN) Njikọ Offset - Slip Match (ANSI)
Naanị otu njikọ webụsaịtị nwere efere cranked na -agbanye na ohia ma na -agbakọta na njedebe dị warara. A na -etinye ntụtụ njikọ dabara adaba (Nke 128.
Cranked Hyperlink Ugboro abụọ (BS / DIN) Pitch Offset abụọ Weebụsaịtị njikọ (ANSI)
Hyperlinks nwere oghere okpukpu abụọ dị maka ọtụtụ nha na ụdị yinye. Ngalaba ahụ gụnyere njikọ webụsaịtị dị n'ime (Nke 4. Ndị na -ewepụta ihe nkedo na -arụ ọrụ na -agbaji yinye site na ịmanye ngwụcha nchara dị nro na efere njikọ dị na mpụga. Maka ụdị ụdị yinye ndị ọzọ, ọmarịcha rivet ga -ebu ụzọ bụrụ
Ever-Ike Gear Reducers Co., Ltd.
Dị ka otu n'ime ndị na-emepụta gia ndị na-ebubata ngwa ahịa, ndị na-ebubata ya na ndị na-ebupụ ya nke ngwaahịa, anyị na-enye gearboxes gearbox na ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ.
Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Chain igwe anaghị agba nchara na ahịrị ahịrị akwụkwọ igwe anaghị agba nchara
Mkpa ọ dị n'usoro iwu akọwara nke ọma
Ụdị Cylinder Hydraulic
Ụdị nke Gear Rack
Na-eji na ofdị nke Kwadobe Dị ka Axle ma ọ bụ Shaft Position
Ọrụ na Ojiji nke gearbox
Cranked Hyperlink Ugboro abụọ
GỊNỊ mere ha ji họrọ US
Anyị ebupụwo ngwaahịa anyị ndị ahịa gburugburu ụwa ma nweta aha ọma n'ihi ogo ngwaahịa anyị dị elu na ọrụ ahịa ahịa.
Anyị ji obi ụtọ na-anabata ahịa ma n'ụlọ na mba ọzọ kpọtụrụ anyị kpakorita azụmahịa, mgbanwe ọmụma na-ekwenyere anyị.
Companylọ ọrụ anyị na akụkụ ndị edepụtara edepụtara dị n'ime ebe a anaghị akwado OEM.